Lawula uhlaziyo lweMacOS kunye neeapps ezikwiVenkile ye App | Ndisuka mac
Ukusuka kukhetho lwenkqubo kunokwenzeka lawula ukugcwala kokukhuphela ngokuzenzekelayo okanye ngesandla. Singazilawula zombini inkqubo yokusebenza, kunye nokusetyenziswa okuthengwe kwivenkile yesicelo seApple. Oku kuluncedo ngakumbi xa kuziwa ekukhupheleni iinguqulelo ezipheleleyo zenkqubo yokusebenza. Xa inkqubo entsha yokusebenza iphuma kwaye iMac yethu yamkela le nguqulo intsha, isifaki siyakhutshelwa ngasemva. Umzekelo, oku kwenzeka xa usuka kwi-MacOS Sierra ukuya kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra. Kwelinye icala, sinokufuna ukuba usetyenziso lukhutshelwe kwaye lufakelwe ngokuzenzekelayo okanye ngesandla.
Ukubonisana noqwalaselo kunye nokwenza utshintsho olufanelekileyo, kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Yiya kukhetho lwenkqubo. Eyona ndlela ilula kukufikelela kwiapile yeApple ebekwe kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Ngoku sijonge i ivenkile yesicelo se icon kwaye ucofe kuyo.
Ngoku sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo, esinokuthi sizikhethe okanye singazithandi. Ngale ndlela, iindlela onokukhetha kuzo zezi:
Khuphela uhlaziyo olutsha olufumaneka ngasemva.
Faka uhlaziyo lweapps ezintsha.
Faka uhlaziyo olutsha lweMacOS.
Faka iifayile zedatha yenkqubo kunye nohlaziyo lokhuseleko (100% iyacetyiswa)
Ngokwam, ndikhuphela ngokuzenzekelayo uhlaziyo lwenkqubo, njengoko kuyacetyiswa ukuba inkqubo yethu ihlaziywe ngokupheleleyo, kunye neendaba zamva nje kwaye zikhuselwe nakuphi na ukungena. Kwelinye icala, kwimeko yezicelo, kwimeko yam, ndifunde ukuba zizisa ziphi iindaba kwaye ndizivavanye emva kohlaziyo. Kodwa lo ngumcimbi wokungcamla.
Kwelinye icala, kwiikhompyuter ezinamandla okulungisa inkumbulo, iikhompyuter ezine-128 Gb., Kunganomdla ukukhuphela uhlaziyo nje ngexesha lokufaka ingxelo entsha. Ngale ndlela, kwiimeko ezininzi siyakuphepha "ukuhambisa" malunga ne-5 Gb kwimemori.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Lawula uhlaziyo kwiMacOS kunye neeapps ezivela kwiVenkile ye App
UPachi Carrillo sitsho
Kwaye ususa njani uhlaziyo "oluqhubekayo" ?????? NdineMacMini Med 2011 kwaye ndihlala ndifumana uhlaziyo lwefirmware endilwenzayo kwaye luphuma kwakhona.
Phendula Pachi Carrillo
UMatthew Roberts, usibonisa iApple Park esele igqityiwe